Ka eeg DVD-yadaada iTunes, iPhone ama iPad adigoo adeegsanaya MacX DVD Ripper Pro | Wararka IPhone
In kasta oo qaabka DVD-ga uu noqonayo wax la soo dhaafay, qaabka dhijitaalka ah wuxuu sii wadaa inuu ballaariyo xukunkiisa. Hadaad filim leedahay DVD-ga aad rabto inaad ka daawato iTunes, iPhone-kaaga ama iPad-ka oo aadan aqoon sida loo wareejiyo, waxaan kuu sheegaynaa sida loo sameeyo ee ku saabsan iPhone News. Si tan loo sameeyo, waxaan isticmaali doonnaa barnaamijka MacX DVD Ripper Pro, awood u leh inaad u wareejiso DVD-yadaada iPhone, iPad ama Mac. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad DVD khaas ah u wareejiso kombiyuutarkaaga si aad u kaydiso nuqul ama aad ugu soo dirto YouTube ama aad si fudud u rabto inaad u daawato filim aad ku hayso ururintaada. Barnaamijkan ayaa kaa caawin doona inaad sidaa sameyso waxaadna fursad u leedahay inaad ku hesho bilaash, tan iyo inta u dhexeysa hadda ilaa iyo Diseembar 31 1.000 nuqul oo bilaash ah maalintii waa la kala qaybin doonaa. Haddii aad ku guuleysato inaad hesho nuqul, waxaad heli doontaa dhammaan xulashooyinka barnaamijka si aan xad lahayn, marka laga reebo cusbooneysiinta mararka qaarkood. Haddii aad rabto, sidoo kale waad heli kartaa mid nuqul la bixiyay.
MacX DVD wuxuu taageeraa daraasiin qaabab ah. Barnaamijkan waxaan ku wareejin karnaa kuweenna DVD si MP4, H.264, MOV, AVI, WMV, MPEG, FLV, M4V faylasha; iyo kuwo kale. Ka dib wareejinta xogta, iyada oo loo marayo interface fudud oo macquul ah, waxaan sidoo kale heli doonaa ikhtiyaarka ah in lagu saxo fiidiyowyada barnaamijyada sida Final Cut ama Adobe Premiere.
Barnaamijku waa mid xawaare sare ku socda, sidaa darteed waxaan si dhaqso ah ugu gudbin karnaa feylasha, gaar ahaan haddii aan heysano kumbuyuutar leh dhowr processor. Tayada ayaa kusii nagaan doonta heerka ugu sareeya. Waxaan sidoo kale ku qasbanaaneynaa inaan xoojino in codsigu awood uleeyahay inuu hareer maro heerarka amniga ee kaladuwan iyo xeerarka gobolka si aan u daawan karno fiidiyowyadeena dhib la'aan. Sidan oo kale, dhamaan clipsyadayada ayaa laga heli doonaa iPhone 6s / 6s, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Pro, iyo Apple TV, oo lagu daray aalado kale.
Xusuusnow in dhamaadka sanadka aad heli karto MacX DVD Ripper Pro bilaash.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Ka eeg DVD-yadaada iTunes, iPhone ama iPad adoo wata MacX DVD Ripper Pro (Tartan)
Suunka lacagta ka qaata Apple Watch-geena waxaa loo yaqaan PRIME
Sidee Kooxda Nashqadeynta Sirta ah ee Apple u shaqeeyaan